Home Wararka dagaal culus oo markale ka qarxay Gobolka Gedo
dagaal culus oo markale ka qarxay Gobolka Gedo
Gelinkii dambe ee shalay ayaa waxaa dagaal culus uu ka dhacay duleedka Degmada Balad-Xaawo ee Gobolka Gedo kaas oo u dhaxeeyay Ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen Gaadiid uu la socday taliyaha Amniga degmada Balad-Xaawo oo lagu Magacaabo Cabdi Waaxid,kuwaas oo ku wajahnaa degmada Balad-Xaawo.
Dad ku sugan Balad-Xaawo ayaa u sheegay Radio Dalsan in dagaalka xoogiisa uu ka dhacay agagaarka wabiga mara degmada Balad-Xaawo,sila markaana uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay.
Gaadiidka uu la socday taliyaha Amniga degmada Balad-Xaawo ayaa xilliga la weeraray waxa uu ku wajahnaayeen degmada Balad-Xaawo,iyaga oo ka yimid dhinaca Doolow.
Wararka qaaar oo ana heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaas ay Al-Shabaab ku qabsadeen Gari ciidan,wallow cid madax banaan aysan weli xaqiijin.
Xaalada Goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan ah mid degan,waxaana la sheegay in taliyaha Amniga degmada Balad-Xaawo Cabdi Waaxid uu socdalkiisii iska siiwatay,isla markaana uu gaaray degmada Balad-Xaawo ee Gobolka Gedo.
Previous articleFarmaajo oo ku wajahan Dalka Uganda
Next articleItoobiya oo dooneysa in ay midnimo kula wareegto Somalia (Xeelad cusub)
Dowlad Goboleedyada oo ka soo horjeestay xeerka canshuuraha ee DF Soomaaliya
Digniin loo diray Shacabka Magalada Garoowe